Zimbabwe neEuropean Union Dzomutsiridza Nhaurirano
Chivabvu 07, 2012
Nhaurirano dzekuedza kumutsiridza hukama nekudyidzana pakati peZimbabwe nesangano reEuropean Union, EU, dziri kutarisirwa kutanga muBrussels, kuBelgium nemusi weChina svondo rino.
Chikwata chakamirira Zimbabwe muhurukuro idzi chiri kutarisirwa kusimuka neChipiri chakananga kuBrussels, uko chakakokwa neEU kuhurukuro idzi, uye chakaumbwa nemakurukota matanhatu anobva mumapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Chikwata ichi chiri kutarisirwa kusangana nemukuru anoona nezvekudyidzana kwesangano iri nedzimwe nyika, Amai Catherine Ashton.
Vari muchikwata ichi igurukora rezvehupfumi, VaEltona Mangoma, pamwe negurukota rezvemari, VaTendai Biti. Vaviri ava ndeve MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai. Makurukota achange akamirira Zanu PF, anoti rezvekunze kwenyika, VaSimbarashe Mumbengegwi, pamwe nerezvemitemo, VaPatrick Chinamasa.
MDC inotungamirwa naVaWelsham Ncube ichange ichimirirwa negurukota rezvekudyidzana kwematunhu, Amai Priscilla Misihaimbwi-Mushonga, pamwe negurukota rezvepodza mavanga nekugarisana kwanakanaka kwemavnhu, VaMoses Mzila Ndlovu.
Munguva iyo EU neZimbabwe dziri kutarisirwa kusimudzira hurukuro dzekudyidzana, bato reZanu PF riri kuti harisi kuzofa rakabvumidza sangano reEU kutumira nhumwa dzaro kuzoongorora sarudzo dzingangoitwa munyika.
Zanu PF inoti EU ine divi rayakatora kare, kunyange mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe, nebato ravo reZanu PF, vakakunda musarudzo.
Bato iri rinoti harina dambudziko nevamwe vanoongorora sarudzo vanobva kumasangano akaita seUnited Nations, SADC, nemamwe, uye nyika dzakaita seBrazil, Russia, India, China neSouth Africa.
Mukokeri weZanu PF mudare reparamende, VaJoram Gumbo, vanoti zvikonzero bato ravo riri kurambidza EU kuongorora sarudzo ndezvekuti sangano iri rakavatemera zvirango uye riri kuda kuona kubva pachigaro kwebato ravo.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, avo vakabuda pachena kuti vanoda kumirira bato reMDC-T musarudzo, vanoti danho reZanu PF iri kurasika chaiko sezvo sangano reEU riri kuita zvizhinji mukubatsira munyika.